Raya and the Last Dragon (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 7.7/10 11635 votes
ဒီတစ်ခါမှာတော့ စိတ်ကူးယဉ်ကာတွန်းဇာတ်လမ်းကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ နှစ်သက်သဘောကျမယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင် March 3/2021မှာထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး lMDb 7.8/10ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာဆိုရင် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ နဂါးအမြုတေပြန်ရဖို့ ရာယာဆိုတဲ့ မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ စွန့်စားကြိုးပမ်းမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးတုန်းက ကွန်မန်ဒရာဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံရှိပါတယ်။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာ နဂါးတွေနဲ့အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြပါတယ်။ နဂါးတွေက နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက် မိုးရေနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကို သယ်ဆောင်လာပေးပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မိစ္ဆာဒရွန်းရောက်လာပြီး အားလုံးကိုစားသုံးပစ်လိုက်ပါတယ်။ နဂါးတွေရော လူတွေရောကျောက်တုံးတွေအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးနဂါးအမြုတေက လူသားတွေကို မိစ္ဆာရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တန်ခိုးကြီးတဲ့နဂါးအမြုတေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရင်း ကွန်မန်ဒရာနိုင်ငံကြီးဟာ အပိုင်းငါးပိုင်းကွဲသွားပါတော့တယ်။နဂါးအမြုတေကို အကြီးအကဲဘန်ဂျာရဲ့ ဟက်ခ်နိုင်ငံတော်မှာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။
အကြီးအကဲ ဘန်ဂျာက တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းကွဲနေကြတဲ့နိုင်ငံငါးခုကို ပြန်လည်စုစည်းပြီး ကွန်မန်ဒရာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ပြန်လည်ထူထောင်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ နဂါးအမြုတေကို လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းဖို့ သူ့ရဲ့သမီး ရာယာကို တာဝန်လွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘန်ဂျာဟာ ငါးနိုင်ငံက အကြီးအကဲတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ကွန်မန်ဒရာနိုင်ငံကြီးကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူထင်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ လူတွေဟာ နဂါးအမြုတေကိုဘဲအပိုင်သိမ်းချင်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လောဘသမားတွေကြောင့် နဂါးအမြုတေဟာအပိုင်းပိုင်းပျက်စီးသွားပြီး မိစ္ဆာဒရွန်း ပြန်လည်နိုးထလာပါတော့တယ်။ ရန်သူကိုမျက်စိမှိတ်ယုံစားမိတဲ့အတွက် ဘန်ဂျာဟာ ကျောက်တုံးအသွင်နဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ အပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ နဂါးအမြုတေအားလုံးကို ပြန်လည်စုစည်းဖို့နဲ့ ဘန်ဂျာကိုကယ်တင်ဖို့တာဝန်ဟာ ရာယာဆီရောက်လာပါတယ်။ ဒီအန္တရာယ်အခက်အခဲတွေကို ရာယာဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ?နဂါးအမြုတေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပြန်လည်စုစည်းနိုင်မလား? ဘယ်လိုစွန့်စားမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှူလိုက်ပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ….
Option 1 megaup.net 510 MB SD (480p)
Option2server.mfile.cloud 510 MB SD (480p)
Option 8 megaup.net 1.2 GB HD (1080p)